Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » | » Duulimaad Cusub San Jose oo ku socda Palm Springs
| • Airlines • Airport • Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga!
Duullimaad cusub oo Alaska Airlines ah oo ka yimid madaarka caalamiga ah ee Mineta San José (SJC) iyo Palm Springs International Airport (PSP) ayaa maanta bilaabatay.
Duulimaadyada Alaska Airlines ee maalinlaha ah waxay ka baxaan Mineta San José 8:10 subaxnimo, iyagoo imaanaya Palm Springs wax yar ka hor 9:30 subaxnimo, maalin kasta. Kuwa Palm Springs jooga, duulimaadka maalinlaha ah ee ku socda San José waxa ay tagtaa 10:10 subaxnimo
"Adeeg aan joogsi lahayn ee Palm Springs wuxuu ahaa dariiqa ugu sarreeya ee la codsado dhowr sano," ayuu yidhi John Aitken, Agaasimaha Duulista ee SJC. "Xiriirkan ka dhexeeya Dooxada Silicon iyo Dooxada Coachella waa calaamad aad u xiiso badan oo soo kabasho ah, labada gobolna waxay ka faa'iidaysan doonaan ku habboon, adeegga maalinlaha ah."
"Sugidda adeegga aan joogsiga lahayn ee San José waxay mudnaan u ahayd Madaarka Caalamiga ah ee Palm Springs," ayuu yidhi Ulises Aguirre, Agaasimaha Fulinta ee Duulista ee Magaalada Palm Springs. "San José, oo ay weheliso inta kale ee Aagga Bay, waa meesha ugu sarreysa ee dadka deggan iyo ganacsiyada Dooxada Coachella, waxaanan uga mahadcelinaynaa Alaska isku xirka PSP iyo SJC."
Daah-furka adeeggu waxa uu bilaabmayaa wakhtiga fasaxa ee Thanksgiving-ka ee mashquulka badan, kaas oo bilaabmaya maanta, iyada oo Mineta San José International ay filayso 400,000 oo safar ah ilaa usbuuca soo socda. SJC waxa ay bixisaa kuwan soo socda si ay u caawiyaan dadka safarka ah in ay culayska saaraan Gegida dayuuradaha xilliga fasaxa:
Boos sii qabsasho cusub oo online ah ayaa laga heli karaa flysanjose.com/parking
Soodhawaynta Carruurta Cusub ee u dhaw Albaabka 25
Makhaayadda Ganacsadaha Cusub ee Vick ee ku taal Terminal B
Gitaariyeyaasha tooska ah waxay gaaf wareegayaan Terminalka ilaa 11/25
Danjirayaasha Garoomada ee Terminal-yada si ay u bixiyaan kaalmada dadka safarka ah
"The Lounge ee SJC" waa furan yahay
Barnaamijka Lanyard gabbaldayaha (ee socotada w naafada qarsoon)
Kuwa ku safraya xilliga fasaxa waxaa lagu xasuusinayaa inay xirtaan daboolka wejiga ee Madaarka iyo inay raacaan diyaaradaha. SJC waxay ku talinaysaa in la yimaado ugu yaraan laba saacadood ka hor wakhtiga duulimaadka si loogu ogolaado baarkinka, tigidhka, iyo baadhista, iyo in laga hubiyo shirkadaha diyaaradaha wixii isbedel ah ee duulimaad ah. Dadka socotada ah ee ka dhoofaya SJC waxay hore u sii qorsheeyeen oo ay lacag u kaydsan karaan iyagoo ku qabsanaya baarkinka garoonka. Si aad u xajisato Baarkinka Madaarka ee onlayn oo aad u aragto helista baarkinka wakhtiga dhabta ah, booqo flysanjose.com/parking.
SJC: Beddelka Sida Silicon Valley u socdaalo
Gegada Diyaaradaha Caalamiga ah ee Mineta San José (SJC) waa gegida dayuuradaha ee Silicon Valley, shirkad iskeed isu taageerta oo ay leedahay oo ay maamusho Magaalada San Jose. Gegida dayuuradaha, oo hadda ku jira sannadkiisii ​​71aad, waxa u adeegay ku dhawaad ​​15.7 milyan oo rakaab ah sanadka 2019, iyada oo adeeg aan joogsi lahayn laga helay Waqooyiga Ameerika iyo Yurub iyo Aasiya. Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan garoonka diyaaradaha, booqo https://www.flysanjose.com.